एक हप्ता भित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ देखेर पनि बेवास्ता गरे धन हानी हुनेछ – live 60media
का’ल देखी अहिले सम्म शिव’लि’ङ्ग’ला’ई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं ग’लाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ःलिं’ग’को अर्थ संस्कृतमा चिन्ह प्रतीक हुन्छ । शिव’लिं’ग’को अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।पुरुष लिं’ग’को अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्री’लिं गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिं’ग’को अर्थ न’पु’सं’कको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।आखिर के हो त शिव लिं*ग ?शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो ।
स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिं ग हो भनिएको छ । शिव लिं*ग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिं*ग हो ।शिव’लिं’ग’को अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिव’लिं’ग’को अर्थ लिं*ग वा यो*नी होइन । वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् । हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्नभिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।त्यसैले शिव लिं गको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो ।
धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ, त्यसैमा विलय हुनाका कारण यसलाई लिंग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत सम्बोधन गरिएको हो ।जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिंग, अग्नी स्तम्भ/लिंग, उर्जा स्तम्भ/लिंग आदि ।ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो ।यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिव लिं गका रुपमा चिनिन्छ । ब्रह्माण्डमा उपस्थित सबै ठोस तथा उर्जा शिव लिं गमा निहित हुन्छ । वास्तवममा शिव लिं ग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो ।
← दुखद खबर, मलेसियामा एक नेपाली चेलीको उपचारको क्रममा मृत्यु
नियन्त्रित पदार्थ तस्करको नक्कली गर्भवतीको शैलीले प्रहरी चकित ! →